Otu esi etinye Python Pip / PIP3 na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
October 23, 2021 by Jọshụa James
Wụnye Python 2 ma ọ bụ 3 na Debian 11
Wụnye PIP 2 ma ọ bụ 3 na Debian 11
Otu esi eji PIP/PIP3
Otu esi ewepu (wepụ) PIP na Debian 11
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye PIP/PIP2 ma ọ bụ PIP3 na sistemụ arụmọrụ Debian 11 Bullseye.
Site na ndabara, Debian 11 etinyewo Python 3. Agbanyeghị, maka ndị ọrụ chọrọ Python 2, enwere ike itinye nke a na nke a Python ma ọ bụ Python2 iwu.
Iji tinye Python2, nke ga-eji PIP2 emechaa, jiri iwu a.
Kwado nrụnye, ma ọ bụ ọ bụrụ na etinyere Python ma ọ bụ python2, ka ịmalite site na ịlele ụdị nrụpụta ahụ.
Dị ka ekwuru, Python 3 kwesịrị itinye ya na ndabara, ma ọ bụrụ na ọ na-efu, ị nwere ike tinyegharịa site na iji iwu a.
Kwado nrụnye ahụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na etinyere python3, ka ịmalite site na ịlele ụdị nrụpụta ahụ.
Iji tinye PIP na Debian 11, ị ga-eji aka budata script bara uru n'ihi na esighi ya na ebe nchekwa ndabara ọzọ.
Nke mbụ, hụ na etinyere ngwungwu CURL.
Ekwesịrị ịkwalite PIP2 na Python 2 ka ọ bụrụ Python 3 na PIP 3 ozugbo enwere ike dịka nke a eruola njedebe nke ndụ.
Mara, nọmba ụdị a ga-agbanwe ka oge na-aga ma bụrụ naanị ọmụmaatụ.
Iji wepu PIP na sistemụ Debian gị, soro iwu ndị a dabere na ụdị ị rụnyere.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye PIP maka Python ma ọ bụ Python 3 wee chọọ, wụnye na wepu ngwugwu. Iji chọpụta ozi ndị ọzọ na PIP, gaa na onye ọrụ gọọmentị akwụkwọ.